त्यो १० मिनेट दिपेन्द्रलाई १० घण्टा जस्तै ~ The Nepal Romania
निर्देशक दिपेन्द्र के. खनाल सोमबार दिन भर हतारिरहेका थिए, आइतबार देखि कार्यक्रमको तयारी गरे पनि अन्तमा कार्यक्रम स्थल र समय नै परिवर्तन गरेका दिपेन्द्रले सोमबार बेलुकी झण्डै १० मिनेट निकै तनाव झेल्नु पर्‍र्यो ।
कारण ? उनको दोस्रो प्रजेक्ट अर्न्तगतको चलचित्र 'धर्मा' को अडियो बिमोचन समारोहको । कार्यक्रमलाई निकै सफल बनाउन अडियो बिमोचन समारोहमा आफै प्राविधिक बनेका दिपेन्द्रले प्रविधिबाट धोका पाँउदा निकै नर्भस हुनु पर्‍र्यो । कार्यक्रमकी प्रमुख आकर्षक तथा सोही चलचित्रकी मुख्य नायिका मनिषा कोइराला लगायत चलचित्रको टिमले एक साथ अडियो बिमोचन गरून्जेल सम्म दिपेन्द्र निकै खुशी थिए तर बिमोचन लगत्तै उपस्थित सहभागी र सञ्चारकर्मीका लागि देखाउन खोजिएको भिजुअलमा १० मिनेट सम्म साउण्ड नआउदा उनले केही बेर तनाव झेल्नु परेको थियो । पटक-पटक प्रोजेक्टरको सहायताले गीत देखाउन खोजिए पनि दिपेन्द्र असफल भइनै रहे, उपस्थित सहभागीले झण्डै ती दृश्यलाई १० मिनेट कुनै आवाज विना हेरेका थिए । प्राविधिक गडबडीका कारण आमन्त्रित सहभागीहरूलाई गीत देखाउन नपाएका दिपेन्द्र त्यो बेला झन् निकै टेनशन फुल भए,जब कार्यक्रमको बीचमै बत्ती झ्याप्प गयो। तर त्यो बत्ती एक मिनेटका लागि मात्र गएकाले उनी पुन कुल हुन पुगे ।कमजोरी न त त्यहाँ दिपेन्द्रको थियो न त प्रविधिको । मात्र गल्ती थियो लोडसेडिङ्गको, लोडसेडिङ्ग भईरहेको अवस्थामा प्रोजेक्टर अन गर्दा ब्याकअपले नधानेर साउण्ड आएको रहेनछ । तर झयाप्प १ मिनेट बत्ती गएर पुन उज्याले हुदाँ प्रोजेक्टर पनि चल्यो र साउण्ड पनि राम्रो आयो । अनि एक-एक दिपेन्द्र खुशी भए । काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको सो विमोचन समारोहमा चलचित्र 'धर्मा' को तीन वटा गीतका भिजुअल देखाइएको थियो । आश्मा फिल्मसको ब्यानमार निर्माता डा. दुर्गा पोखरेलले निर्माण गरेको सो चलचित्रमा जम्मा ३ वटा गीत रहेका छन् । ती सबै गीतमा हरि लम्सालले संगीत भरेका हुन । नायक राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, मनिषा कोइराला, अनु शाह लगायतको अभिनय रहेको सो चलचित्र आगामी कात्तिक महिनामा प्रदर्शनमा आउँदै छ । यहि चलचित्र मार्फत २० बर्षपछि नेपाली रजतपटमा पुन फर्किएकी नायिका मनिषा कोइरालाको अभिनयलाई अधिकाशं चलचित्रकर्मीले निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।